ओली सरकारबिरुद्ध र अनसनरत डा. केसीको पक्षमा काठमाडाैंमा प्रदर्शन — Sanchar Kendra
ओली सरकारबिरुद्ध र अनसनरत डा. केसीको पक्षमा काठमाडाैंमा प्रदर्शन
काठमाडौं । २७ दिनदेखि अनसनरत डाक्टर गोबिन्द केसीको पक्षमा उनका समर्थहरुले शनिबार कथ्मंदुको माइतिघरमा प्रदर्शन गरेका छन् । डा. केसीको स्वास्थ्यमा गम्भिर समस्या देखिँदा पनि सरकार उदासिन बनेको भन्दै सोलिडारिटी फर डा. केसीको आहृवानमा प्रदर्शन भएको हो ।
प्रदर्शनमा सहभागीहरुले ‘माफियाको समाजवाद, यती, ओम्नी, मार्सी भात’, ‘सत्याग्रही मार्न खोजेको ? ‘दूरदराजमा मेडिकल शिक्षा खै ?’ लगायतका नारा लगाएका छन् । सरकारी र डा. केसीको तर्फबाट बनेको वार्ता टोलीबीच शुक्रबार राति अबेर भएको वार्ता असफल भएको थियो ।
प्रदर्शनमा सहभागी वार्ता टोलीका सदस्य अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले असोज २२ गते सरकारी पक्षसँग समझदारी भएपनि प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री निर्देशनमा सहमति गर्न रोकिएको बताए । डाक्टर केसी ६ बुँदे माग राखेर २७ दिनदेखि अनसनरत बसिरहेका छन् । वार्ता टोलीस्तरमा भएको सहमतिलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले अस्वीकार गरेपछि सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच हुनै लागेको सहमति भाँडिएको थियो।
सहमतिको मस्यौदा सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक एवं शिक्षा सचिव गोपी मैनालीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसम्म पुर्याएका थिए । स्रोतका अनुसार सरकारी पक्षबाट त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) पदाधिकारी लगायतको नियुक्तिको मापदण्ड ऐनमा समावेश नहुँदासम्म हुने नियुक्तिबारे सहमतिको मस्यौदाको भाषामा थोरै हेरफेर गरेको थियो । अरु सबै विषयमा वार्ता टोलीबीच भएको सहमति नै सदर भएको थियो ।
त्यही परिमार्जित विषयमा दुई वार्ता टोली बसेर टुंगो लगाउने र डा. केसीको अनसन शुक्रबार नै तोडाउने तयारी थियो । त्यही सन्देश पाएको डा. केसीको वार्ता टोली दिनभर तयारी अवस्थामा थियो । तर सरकारी टोली वार्तामा आएन । स्रोतका अनुसार सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक मैनालीले लाइन मिनिस्टरलाई देखाएर मात्र सहमतिलाई आौपचारिकता दिन चाहे, तर मन्त्रीले साँझ ७ बजे मात्र समय दिए । त्यसपछि पनि मन्त्री पोखरेलले दुई वार्ता टोलीले बनाएको मस्यौदामा थप संशोधन गरे ।
उनले चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधनसम्बन्धी सहमतिमा डा. केसीसँग सहमति भएको मिति हटाइदिए । साथै अहिले गर्न लागिएको सहमतिलाई मन्त्रिपरिषद बैठकमा लैजाने भन्ने बुँदा पनि हटाउन लगाए । त्यही कारण हुनै लागेको सहमति भाँडिएको छ । स्रोतले भन्यो, ‘वरिष्ठताका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने बुँदामा समेत सहमति भइसकेको थियो, तर एकाएक सहमति भाँडियो ।’
सहमतिको मस्यौदामा संशोधन गरेका शिक्षामन्त्री त्यसपछि सरकारी वार्ता टोलीको सम्पर्कमै नआएको बताइएको छ । डा. केसीको वार्ता टोलीका सदस्यले सम्पर्क गर्न खोज्दा समेत उनी सम्पर्कमा नआएपछि सहमतिका लागि शुक्रबार अबेरसम्म भएको प्रयास असफल भएको हो।